समग्रमा कांग्रेस अगाडि, कुन पार्टी कहाँ अगाडि ? - New York Samachar
समग्रमा कांग्रेस अगाडि, कुन पार्टी कहाँ अगाडि ?
काठमाडौं, ४ असोज । प्रदेश नम्बर २ का स्थानीय तहका मत गणना जारी रहेको छ । १३६ स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनको सबै नतिजा शनिबारसम्म सार्वजनिक हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । पछिल्लो मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस अग्रस्थानमा देखिएको छ ।
हालसम्म ८२ स्थानीय तहको प्रारम्भिक नतिजामा नेपाली कांग्रेसको सुरुआती अग्रता कायम रहे पनि अन्तर घट्दै गएको देखिन्छ। कांग्रेसले सबैभन्दा बढी २४ स्थानका मेयर र अध्यक्षमा अग्रता लिएको छ।
अहिलेसम्म कांग्रेसले अग्रता लिएका २४ स्थानः
दोस्रो स्थानमा रहेको एमालेले १८ स्थानीय तहमा अग्रता लिएर एकदमै कम अन्तरमा पछ्याइरहेको छ।
पटेरुवा सुगौली गाउँपालिका
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम १६ स्थानमा अग्रता लिँदै तेस्रो स्थानमा छ।
माओवादी केन्द्र १४ स्थानमा अगाडि छ।
राजपा नेपाल १० स्थानीय तहमा अग्रस्थानमा छ।
पचरौता सिम्रौनगढ नगरपालिका
त्यस्तै फोरम लोकतान्त्रिक महोत्तरीको जलेश्वरमा अगाडि छ।